Dear respected parents – Nay Pyi Taw International Science academy
COVID period Teaching and Learning Policy
Oattara Thiri Myo Thit. Naypyitaw
Oattara Thiri Myo Thit
Greeting from the management!
[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/2″ el_position=”first”]
Dear respected parents,
2017-18 IB programme results have been released recently and we are very pleased to inform you that our students’ results have been outstanding. Our students have achieved 100% success rate in our IB diploma programme. We would like to congratulate our students for their success and thank our dedicated teachers and parents for their support.
Secondly, one of our high school students has participated in the Genius Olympiad Programme, New York (USA) and the student has received Silver Medal among the students competing from 68 countries. We are very much proud of this achievement of our student and the Olympiad team. Our school Olympiad team is actively working on many International Olympiad Programmes and we believe that they will make us proud by bringing more laurels in the coming academic year.
We are very pleased to announce that we have recruitedavery dedicated and experienced team of teachers for the coming academic year. The team is very motivated and preparations are going on to offer sound programmes to our students for the continuous improvement of our education programmes.
Mr. Ambler Moss, has joined us as head of school who has been working with us since last year. We have recruited Ms. Sarah Egan as an academic coordinator for our schools. She isaCanadian national with 15 years of experience in education quality improvement.
Finally, we have been improving our school facilities during the summer vacation and now we are pleased to inform you that we have renovated our football pitch, lunch hall, tennis courts, playground and classrooms. We would like to invite you to visit the school and meet our team at your earliest convenience.
U Ye Tun
နေ့စွဲ။ ။ ဇူလိုင်လ (၁၇) ရက်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်။
ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်လိုက်သော ၂၀၁၇/၂၀၁၈ ခုနှစ် အတွက် IB Programme စာမေးပွဲအောင်စာရင်းတွင်ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့ကြကြောင်းကို မိဘများအား ၀မ်းမြောက်စွာဖြင့်အသိပေးလိုပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားများသည် IB Diploma Programme တွင် အောင်မြင်မှုနှုန်းအားဖြင့် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ၏ အောင်မြင်မှုအတွက်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပြီး အဖက်ဖက်မှပံ့ပိုးကူညီပေးသော ဆရာဆရာမများ နှင့် ကျောင်းသားမိဘများအားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ဒုတိယအားဖြင့် New York (USA) တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံပေါင်း (၆၈)နိုင်ငံမှပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြသော Genius Olympaid Programme တွင် ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှ အထက်တန်းကျောင်းသားတစ်ဦးမှ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး ငွေတံဆိပ်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဤကဲ့သို့အောင်မြင်မှုရရှိအောင်စွမ်းဆောင် နိုင်ခဲ့သော ကျွန်တော်တို့၏ကျောင်းသားနှင့် Olympaid အဖွဲ့အတွက်များစွာ ဂုဏ်ယူမိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ Olympaid အဖွဲ့သည် များစွာသော International Olympaid အစီအစဉ်များတွင်တက်ကြွစွာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိ်ုင်ပြီး နောက်လာမည့်နှစ်များတွင်လည်း ကျွန်တော်တို့ကျောင်းအတွက် အောင်မြင်မှုသရဖူများ ထပ်မံယူဆောင်ပေး နိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် ယခုလာမည့်ကျောင်းစာသင်နှစ်အတွက် အတွေ့အကြုံဝါရင့်သော ဆရာဆရာမ များစွာ ပါဝင်သောအဖွဲ့အားခန့်အပ်ထားပြီးကြောင်းကို ၀မ်းမြောက်စွာကြေငြာလိုပါသည်။ ဤအဖွဲ့သည် တက်ကြွ လှုပ်ရှားပြီး ကျောင်းသားကျောင်းသူများစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်စေရန် ပိုမိုကောင်းမွန်သောအစီအစဉ်များစွာ အတွက် ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်နေပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတွင် ကျောင်းအုပ်အဖြစ် Mr. Ambler Moss ကိုခန့်အပ်ထားပြီး သူသည် ကျွန်တော်တို့နှင့် မနှစ်ကတည်းကပင် လက်တွဲလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ကျောင်းအတွက် Ms. Sarah Egan အား Academic Coordinator အဖြစ်ခန့်အပ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ Ms. Sarah သည် ကနေဒါလူမျိုးဖြစ်ပြီး အဆင့်အတန်းမီပညာရေးတိုးတက်မှုအတွက် ၁၅ နှစ်ကြာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့သည် နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်ကာလများအတွင်း ကျောင်းအတွင်း အပြင် ပိုမိုအဆင့်မီစေရန်ပြုလုပ်ပြင်ဆင်ထားပြီး ယခုအခါတွင် ပြင်ဆင်ထားပြီးသောဘောလုံးကွင်းအသစ်၊ ထမင်းစား ဆောင်၊ တင်းနစ်ကွင်း၊ ကလေးကစားကွင်း နှင့်စာသင်ခန်းများအားအဆင့်မီပြုလုပ်ထားပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းနှင့်အဖွဲ့အား ကျောင်းသားမိဘများ၏အဆင်ပြေမည့် အချိန်တွင်လာရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါ ကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
@2016 NISA by BFI